Guruva muteresi Fekitori | China Guruva muteresi Vagadziri, Vatengesi
Environmental kuchengetedzwa kwemaitiro gungano
Sisitimu yekudzivirira ezvakatipoteredza Guruva Unganidza Iyo yakanaka kwazvo inoteedzana chinhu (soot) inogadzirwa neyakaipisisa tembiricha haina kurapwa uye inoburitswa yakananga isina kurongeka, inosvibisa zvakatipoteredza mamiriro ekunze. Iyo soot ine huwandu hukuru hweanorema simbi zvinhu, uye yakanyanyisa kufema inokanganisa zvakanyanya hutano hwevanhu. Kune zvakare mukana wekuputika kubva muguruva rakanaka kwazvo. Zvinoenderana nemamiriro ekushanda kwelime kiln inogadzira guruva, dutu redutu rinobvisa w ...
Guruva - rine flue gasi rinotanga kupinda muhuswa guruva muunganidzi, iwo makuru maarticles ehuruva anowira pasi pechikona kuburikidza necentrifugal kutenderera, kuitira kuti hombe matutu eguruva abviswe.
Bhegi-mhando Guruva Muunganidzi
Mushure mekubuda mune flue gasi hunyoro hwekupinza, iro guruva-rine gasi rinopinda muhomwe guruva mutori. Kubudikidza nesara rekusefa kwehombodo mambure, iyo diki-inodzika guruva inosara muhombodo kuzadzisa mhedzisiro yekubvisa diki-chidiki guruva.
Mvura firimu desulphurizer
Iyo guruva uye sulphide flue gasi yakayerera ichibva bhegi firita inopinda mune yakatenderera shongwe.
Screw-mhando Mhepo Compressor
Iine basa rayo repamusoro, kushanda kwakanyanya, kuchengetedza kwemahara uye nezvimwe zvakanaka, Screw mhando mweya compressor inogara ichipa yakakwira yakamanikidzwa mweya kune ese mafambiro ehupenyu.
Yakagadziriswa dhizaini yekuisa fan
Iyo inokonzeresa dhiri fan inoshandiswa kubvisa iyo yakanyanya tembiricha flue gasi muvira, iro rinoshandiswa zvakanyanya kune mweya uye nemhepo mumabhaira uye maindasitiri mafesi.
Karusiyamu Hydroxide Kugadzira, Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Karusiyamu Hydroxide Equipment, Kugadzira Calcium Hydroxide, Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment,